प्रदेशको स्थायी राजधानी टुंगो लागेको १ वर्षपछि लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङमा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।
कार्यालयको मंगलवार मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसीले उद्घाटन गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको छ । सम्पर्क कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार र जनसम्पर्क सल्लाहकार नियमित बस्ने, हरेक हप्ताको शुक्रवार मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसी आउने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
यसअघि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजधानी कार्यान्वयनलाई गति दिन मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै मंगलवार राजधानी क्षेत्रमा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको हो ।
‘यहाँ मेरा राजनीतिक सल्लाहकार र जनसम्पर्क सल्लाहकार नियमित बस्नुहुन्छ । म हरेक शुक्रवार यहाँ आउने छु,’ मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसीले भने, ‘राजधानी कार्यान्वयनलाई गति दिन चाहेका छौं । तिहारलगत्तै अन्य मन्त्रालयहरू पनि यहाँ सर्ने छन् ।’
हाल देउखुरीमा पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय स्थापना छ । गठबन्धन सरकारले बजेट निर्माण गर्ने क्रममा मन्त्रालयको कामकाज वुटवल मुकामबाट सञ्चालन गरिँदा मन्त्रालय सुनसान थियो तर अब मन्त्रालयमा नियमित कामकाजलाई अघि बढाइने बताइएको छ ।
तिहारपछि आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय स्थापना गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले तत्कालको घटनाबाट प्रभावित भएर कानूनमा प्रभाव पार्ने प्रयास नगर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन् । तत्कालको घटनाबाट प्रभावित भएर कानून संशोध...
नेपाली कांग्रेसका संस्थापनइतर पक्षको बैठक शुक्रवार पनि जारी छ । राजधानीको बत्तिसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्याण्डमा डा. शेखर कोइराला पक्षधर नेताहरूको बैठक शुरु भएको हो । सो पक्षको बैठक बिहीवारदेखि शुरु भएको हो ।&n...
सांसद नवराज सिलवालको प्रश्न : सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्दा राष्ट्रले धान्न नसक्ने हो कि ?
नेकपा एमालेका सांसद नवराज सिलवालले लोकप्रियताका लागि बढी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्दा राष्ट्रले धान्न नसक्ने अवस्था आउने हो कि भन्नेतर्फ सचेत गराएका छन् । उनले श्रम गर्नसक्ने एकल महिलाहरूलाई भत्ता दिनुभन्दा आयआ...
राष्ट्रियसभाबाट रेलवे, औषधि व्यवस्था तथा बजेटसम्बन्धी गरी ६ विधेयक पारित
राष्ट्रियसभाबाट तीनवटा विधेयक पारित भएको छ । शुक्रवार बसेको बैठकमा ‘रेल्वे विधेयक, २०७९’, ‘औषधि (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ र ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्...
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत् नै वितरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ ल...
मधेश सरकारद्वारा ९५ शहीद परिवारलाई आर्थिक सहयोग
मधेश प्रदेश सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा शहीद भएका सिरहाका ९५ परिवारलाई १ लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । मधेश प्रदेश सरकारको गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय र मधेशी शहीद प्रतिष्ठानद्वारा स...